Fifandonana tamin’ny dahalo :: Zandary iray voatifitra teo amin’ny tarehiny • AoRaha
Fifandonana tamin’ny dahalo Zandary iray voatifitra teo amin’ny tarehiny
Naratra mafy ny zandary kilasy faharoa, Rabefinaritra Toky nandritra ny fifandonana tamin’ ny dahalo, tany Amboraka-Marovitsika any Befotaka Atsimo, tamin’ny alarobia alina tokony tamin’ny 7 ora. Naharitra ny fifampitifirana teo amin’ireo zandary sy ireo dahalo maromaro nitondra omby am-polony. Voan’ny bala teo amin’ny tarehiny io zandary io. Nalaina tamin’ ny helikoptera tany an-toerana izy, afak’omaly.
Tsy afaka nandeha intsony io zandary io rehefa voatifitra, araka ny loharanom-baovao. Afaka niaro azy hatramin’ny farany anefa ireo zandary hafa niaraka taminy. Betsaka tamin’ireo dahalo rahateo no ahiana ho maty voatifitra satria nisy tamin’ireo basy noentin’izy ireo no azon’ireo zandary. Nanome baiko nanavotana an’itsy zandary naratra mafy itsy tamin’ny angidim-by ny jeneraly Ravalomanana Richard, Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, izay namita iraka tany Fianarantsoa rahateo tamin’io fotoana io, vantany vao naheno ny zava-nisy.
Teo am-panaovana solika tao amin’ny seranam-piaramanidina any Fianarantsoa ny helikoptera nitondra ny Seg sy ny minisitry Filaminana anatiny no naheno ny tranga izy ireo, afak’omaly. Nikasa hamita iraka any Ikalamavony ireo manampahefana miaraka amin’ny Praiminisitra sy ireo minisitra vitsivitsy. Nalain’io helikoptera io ilay zandary naratra mafy. Tonga ao Fianarantsoa izy manaraka fitsaboana. Tsy misy atahorana intsony ny ainy, raha ny loharanom-baovao. Avotra avokoa ireo omby am-polony nangalarin’iretsy dahalo.
Voina teny am-pambolen-kazo Namangy ny havan’ilay lehilahy maty tampoka ny Zandarimaria
Fisamborana teto an-drenivohitra Nifampitifitra ny zandary sy ny mpaka an-keriny
Halatra niharo vono :: Mpitondra môtô maty voatsatoka antsy
Mpanakanto niharan-doza :: Namoy ny mpandihiny teny Ankazobe ny tarika D’alvis